Xiddig ka tirsan Chelsea oo si xoogan u amaanay laacibka kooxda Man City ee Raheem Sterling – Gool FM
Dajiye November 13, 2019
(London) 13 Nof 2019. Xiddig ka tirsan kooxda Chelsea ayaa si weyn u amaanay laacibka Manchester City ee Raheem Sterling, kaddib markii laga saaray liiska xulka qaranka England ee dheelaya kulanka isreeb-reebka koobka Euro 2020, kaasoo barri oo khamiis ah kula ciyaari doonaan xulka Montenegro.
Ka saarista Raheem Sterling ee liiska xiddigaha xulka qaranka England ayaa waxay imaaneysaa kaddib markii uu la dagaalay daafaca Liverpool ee Joe Gomez kulankii Axada lasoo dhaafay ay ku wada ciyaareen garoonka Anfield.
Haddaba xiddiga kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi ayaa ku tilmaamay saaxiibkiis Raheem Sterling inuu yahay xiddig cajiib ah oo dhameystiran isla markaana ah tusaale, isagoo la hadlayay shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaana wuxuu yiri:
“Qof sida Raheem Sterling oo kale ah ayaa tusaale ii ah aniga, marka loo fiiriyo booska uu ku sugan yahay, wax qabadka kooxdiisa iyo xulka qaranka, waana wax cajiib ah”.
“Waa dareen layaab leh inaad heysato shaqsi isagoo kale ah ee sameeya waxa uu sameynayo, oo xilli kasta hareerahaaga jooga, waxaan doonayaa inaan sii wado inaan wax ka barto waxa uu sameynayo”.
“Raheem waa shaqsi aad u wanaagsan, dhiirigelin iyo rajo leh waxkasta uu sameynayo, markii ugu horeysay ee aan xulka ku soo biiray, ma aanan fileynin inuu sidaan oo dhan u fiicnaanayo”.
“Marka aad aragto shaqsi caadeystay inuu ku soo dhaweeyo, isla markaana kula sheekeysta addiga, kuna siiya tallooyin ku saabsan sida loo ciyaaro, waxaad dareemeysaa in si fiican laguugu soo dhaweeyay kooxda”.
“Waa hogaamiye weyn, maxaa yeelay waa ciyaaryahan fiican, wuxuu ciyaaraa kulan kasta, ha ahaato kooxdiisa ama xulka, wuxuuna u shaqeeyaa si adag, sidoo kale wuxuuna dhaliyaa goolal badan”.